Ireo Sarimiaina Hongroà Mahasondriana Tamin’ny Vanim-Potoanan’ny Ady Mangatsiaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2016 14:50 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, عربي, Italiano, اردو, English
Dikasary avy amin'ny sarimiaina “Te-hanambady i Gustav.”
Na dia tao ambadiky ny voaly vy aza i Hongria nandritra ny Ady Mangatsiaka (1947-1991), dia niezaka ny hanondrana sarimiaina ambony kalitao hatrany ilay firenena.
Ny Iron Curtain (voaly vy) no voambolana nampiasaina tamin'ilay sisintany alaina sary an-tsaina manasaraka an'i Eoropa ho vondrona roa mifanohitra, manasaraka ny firenena sosialista ao amin'ny Dinan'ny Varsovia — Firaisana Sovietika miaraka amin'ireo zanabolana miaraka aminy Alemaina Atsinanana, Pôlônina, Tsekoslovakia, Boligaria, Romania ary Hongria — amin'ny hafa eto amin'izao tontolo izao ary tafiditra amin'izany ilay firenena sosialista tsy nirona tatsy na taroa Yogoslavia.
Ny dikan'ny hoe ambadiky ny voaly vy tamin'izany dia hoe voafetra ny fahafahana mivezivezy malalaka, ny mizara hevitra, ary ny fiainana an-takonana, ary noterena hiandrona ao amin'ny toerana iray voafaritra ny tsenan-dry zareo izay niteraka fari-piainana ambany tany amin-dry zareo. Taorian'ny famoretana tamin'ny ra mandriaka ny fitroarana tamin'ny taona 1956, vao nomena alalana hisokatra tsikelikely tamin'ny toe-karenan'ny tsena malalaka sasantsasany ny mpitarika hongroà ary naverina ny fahalalahana sasantsasany, izay niteraka lalàna somary malefadefaka kokoa — raha oharina tamin'izay tany URSS — izay fantatra ho Komonisma Golagy.
Nahazo tombontsoa tamin'izany ny artista ka nanomboka namokatra sarimiaina be mpijery maro dia maro. Jereo ny ohatra telo eto ambany.
Ny sarimiaina mampihomehy “Gustav” (Gusztáv Hongroà 1961-1977) na “Gustavus” no iray amin'ireo kolontsaina vitsy naondrana avy ao Hongria nieli-patrana indrindra. Miresaka singa amin'ny fiainana andavanandro izy io, ary tafiditra amin'izany ny fahafenoan'ny fanjakam-birao, sy ireo lohahevitra mpanao sangy ratsy hafa, toy ny fahatsapana ho tsy afa-po amin'ny fiainana.
Ankilan'ny politika, dia voafetra amin'ny mampiavaka manokana ny fiteny hongroà ny fanondranana ara-kolontsain'i Hongria. Niankina tamin'ny teknikan'ny “sarimihetsika mangina” i Gustav, ary vitsy ny lahatsoratra nampiasaina, izay no nahafahany miantso ny tontolo manerantany.
Namela vakoka maharitra tany amin'ny firenena rehetra nanehoana ny mahasarika aminy i Gustav, hatrany Baltika ka hatrany Adriatika. Mety hisy ny hieritreritra fa tanteraka ny sata fijerin'ny rehetra ity mpandray anjara mikaviavia ity noho ny fisian'ny sarimiaina fohy ao amin'ny YouTube sy ireo sehatra fizarana lahatsary hafa.
Nandritra ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-20, ny fahazoan-kevitra ankapobeny amin'ny sarimiaina tany Eoropa Afovoany sy Atsinanana dia hoe fialamboly ho an'ny ankizy izy ireny, ary ny ankamaroan'ny vokatra dia nokendrena ho an'io sokajin-taona io. (Izay fomba fihevitra izay angamba no nahatonga ny mpanoratra sasany ‘hampiditra an-tsokosoko’ lohahevitra ho an'ny olondehibe sasantsasany.) Ny fahitalavi-panjakana mampiseho ny sarimiaina mandritra ny fotoana mety ho an'ny fianakaviana. Ny ao Yogoslavia, ohatra, tafiditra ao anatin'ny zara-potoana farany tamin'ny 7:15 hariva, mialoha ny vaovao amin'ny takariva izany.
Raha heverina amin'ny fifantohan'ny komonista mankany amin'ny hoavy, dia tsy zava-maivana ho an'ny firenena sosialista izany voka-pandaharana ho an'ny ankizy izany. Manokambola bebe ihany ho an'ny fampianarana ankapobeny sy ny fialambolin'ny tanora, ary tafiditra amin'izany ny literatiora sy ny sarimihetsika ny fanjakana.
Ny andian-tsarimiaina “Anganom-Bahoaka Hongroà” no mahasolotena voalohany ity fironana ity. Nantsoina tamin'ny voalohany ho “Magyar népmesék,” asongadiny ao ny fomba fitantarana vaovao amin'ny fomba tsara sy tsotra ireo anganom-bahoaka, izay matetika ampidirana ny teknikan'ny fampiainan-tsary 2D.
Tafiditra tao amin'ny anganom-bahoaka ny fitantarana, ary nomena feo sosona ho amin'ny fiteny ao an-toerana tany amin'ny firenena rehetra nanondranana azy, ary tafiditra amin'izany i Etazonia (jereo ny ohatra eo ambony). Tamin'ny taona 1978 no nivoahan'ny andian-tsarimiaina voalohany, ary mbola misy mamoaka manerana izao tontolo izao. Vokatr'izany, maro amin'ny mpisera aterineto no namoaka ny kinovan'ny sarimiaina noraketina avy amin'ny fandaharana televiziona tany amin'ny firenen'izy ireo.
Ny andian-tsarimiaina “Mikrobi” (1971) manana fizarana 13 dia manolotra ny fianjorian'ny fianakavian'olombelona iray manavatsava ny habakabaka, ampian'ireo raboto (robot) namany.
Sehatra manavaka ny Mikrobi.
Natao ho an'ny tanora, namela marika amin'ny kolontsaim-bahoaka any amin'ny firenena nampisehoana azy i “Mikrobi”. Tsy nahatratra ny laharan'i “Gustav” izy, saingy mba mahatsiaro ireo fehezanteny sasantsasany nentina hanintonana ihany ireo olona izay ankizy tamin'izany fotoana izany.
Tsy tahaka ny “Anganom-Bahoaka”, tsy dia mahazatra ny endrika an-tseraseran'i Mikrobi, ary mila fahalalana tranonkala hongroà ny fitadiavana azy ireny na teknikam-pitadiavana lalindalina. Ohatra, blaogy makedoniana iray manoka-tena amin'ny fandaharana TV taloha no manolotra fizarana iray, voasosoka amin'ny fiteny makedoniana.
Santionany kely amin'ny tantaran'ny sarimiaina hongroà ihany no natolotr'ity lahatsoratra ity. Mbola betsaka any fa aza misalasala mikarokaroka.